Ireo printsy afrikanina amin'ny fitsangatsanganana an-tsarimihetsika dia miomana amin'ny tanànan'ny fitiavan-drahalahy
Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Ireo printsy afrikanina amin'ny fitsangatsanganana an-tsarimihetsika dia miomana amin'ny tanànan'ny fitiavan-drahalahy
Ny African Princes of Comedy Tour (APCTour) dia mihamitombo isan-taona satria ireo tantara an-tsary mijoro tsara indrindra Afrikana avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao dia midina hanome seho hatsikana malaza manerana ny firenena. Ny APCTour dia manohy ny fandraisana anjara amin'ny morontsiraka atsinanana ao amin'ny SA Café & Lounge any Philadelphia, PENNSYLVANIA 23 Oktobra 2021. Ny seho feno hipoka dia lohatenin'ny lisitry ny mpilalao hatsikana ambony indrindra Dadatoa Azeez, Printsy Afrikana vaovao, Mr. Sirleafson, Cee Y, King Drewwsky, Ofili, Lesley, Setoiyo, ary Dr. Lucas; anarana fanta-daza indrindra amin'ny hatsikana sy mozikan'ny fianakaviana DJ Mezie.
Ny African Princes of Comedy Tour dia manana izany rehetra izany, miaraka amin'ny fifangaroana mampientam-po amin'ny tantara an-tsary nahazo loka ho an'ny fahatsapana amin'ny Internet, miara-miasa mba hanolotra fampisehoana hatsikana malaza. Ny seho dia miantoka ny alin'ny fihomehezana haingana, nampiantranoin'ny mpanorina ny APC sady mpanao hatsikana Foxy P, fantatra amin'ny zava-bitany mampivarahontsana sy ny fifandraisany amin'ny vahoaka. Feno fampisehoana mahatsikaiky tsy an-kijanona ny fampisehoana mba hifanaraka amin'ny fanirian'ny olona rehetra.
Mizotra any amin’ny morontsiraka atsinanana ny fitetezam-paritra, taorian’ny fampisehoana nahomby tany amin’ny faritra Atsimo sy Atsimo Atsinanana.
Ny African Princes of Comedy Tour (APCTour) dia natsangan'ny mpanao hatsikana Foxy P tamin'ny taona 2013 mba hampiasana ny talenta itambaran'ireo mpanao hatsikana afrikanina monina any am-pielezana. Miaraka amin'ny fijanonana 115 manerana an'i Etazonia, UK ary Kanada, nitombo ho mpanao hatsikana 32 ny vondrona, tohanan'ny mpanaraka 5.2 tapitrisa amin'ny media sosialy. Nanao fampisehoana tany amin'ireo tanàna lehibe izy ireo, anisan'izany ny Hollywood CA, New York City, Houston TX, ary Washington DC. Nanao fampisehoana ihany koa izy ireo tany amin'ny oniversite malaza toa an'i Princeton, Yale, New York University ary Harvard.